MAWDUUC 11: ANSHAX | Ung & Gravid
MAWDUUC 11: ANSHAX
Anshax waxaa waaye cilmi oo ku saabsan waxa saxa eh iyo waxa qaladka eh.
Ilmo soo ridida waxa waaye qof gaar u ah iyo oo ey tahay xuquuq gabdhaha dhan iyo naagaha dhan wada heystaan. Micneheeda ma’ahin in ey tahay go’aan fuduud oo la qaadi karo.
Laakiin ilmo soo ridida ma’ahin in laga saaro hal su’aal naageed. Waxaa waaye murti ( dhab-ahaan) hal su’aal aad xaq u leedahay. Wuxuu ku saabsan yahay calaaqaad ka dhexeeya xuquuqda uurkujir iyo xuquuqda dumarka.
Xaqa ee dumarka ey leeyihiin ma’ahin kaliya doorasho ey ku go’aammin karaan korkooda, laakiin noloshooda dhan.
Awood aad ku qaadi kartit mas’uuliyada qofka kale?
Ma jeceshahay in aad qaadid mas’uuliyad qofka kale?
35 % dumar ah oo Noorway joogaan waxey khibrat u leeyihiin hal ilmo dilin. Tani micneheeda waxaa waaye fal oo calaamad u yeelay dumar badan noloshooda iyo laga yaabee qoys badan. In kasto ey tahay mawduuc dad yar ka hadlaan.
Qaar ayaa ka shalaayaan ilmo dilinta, qaar badan ayaa ka shalaaya in ey isticmaalin uurcelis. Kuwa qaarkood oo qaateen ilmo dilin waa ku shafeeceen in ey ka dul bexeen xaalada ey ku jireen iyo ey ka shalaaynin qaliinka. Iyadoo micneheeda aheeyn in ey calaamad u yeelin.
Cunuga abbehiis mu’u heeystaa asaga inuu khibrat u qaadanaayo ilmaha in asaga “soo ridaayo”?
Su’aalaha anshaxa waxey taabaneyaan aasaaska qiimaha nafta bini’aadanka uu leeyahay.
Ma’ fuduudahay in la bixiyo jawaab oo ku saabsan su’aalo laban.
Tijaabi si kastaba in laga wadahadlo dhibaatooyinkaan soo socdo:
Miyee sax tahay in ey dumarka go’aamiyaan uurkujire markoo yahay 12 toddobaad?
Miyee tahay in hal qof go’aamiyo ciribdanbeedka wixii noqan la haa qaf kale?
Goormee nafta imaadaa?
Goormee uurkujireha bini’aadan noqdaan?
Waayo uu sharciga u leeyaha 12 toddobaad?
Miyeey tahya ilmo soo ridid in aad naf qaadeysid?
Goormee imaaney qiimaha bini’aadanka?
Marka uurkujireenka soo noqdo bini’aadan? ved fosterets modning til et fullverdig menneske?
Markii la dhalaayo?
Miyee sax tahay in aduunka la keeno cunug iyadoo dhalanyarta dareensaneen in ey qaadi karaan mas’uuliyad waalidnimo?
Ma caqli gal baa in laga sugo waalidkaaga inuu heegan yahay in uu qaado mas’uuliyada cunuga?